လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ Neurobiological ယန္တရားများ (၂၀၀၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လူမှုတော့ပူပန် Disorder ၏ Neurobiological ယန္တရားများ (2001)
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ - Am J Psychiatry 158: 1558-1567, အောက်တိုဘာ 2001
Sanjay ဂျေ Mathew, MD ဂျယ်ရမီဃ Coplan, MD နဲ့ Jack အမ် Gorman, MD
Objective: အဆိုပါစာရေးဆရာပြင်းထန်စွာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏အတော်ကြာ preclinical နှင့်လက်တွေ့ neurobiological မော်ဒယ်များစစ်တမ်းကောက်ယူ။
METHOD: အဆိုပါစာရေးဆရာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့အထူးသဖြင့်ဆီလျော်မှုသုံးခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့် ပတ်သက်. မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ သူတို့ဟာပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiology အပါအဝင်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏လက်တွေ့ neurobiological ရှုထောင့်ကိုရည်မှတ်မကြာသေးမီကစာပေဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်: အဆိုပါရရှိနိုင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလူမှုရေးလက်အောက်ငယ်သားစိတ်ဖိစီးမှု, ပူးတွဲမှုအပြုအမူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမွေးမြူရဲ့ features တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အသုံးဝင်သော Paradigm ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မလုံလောက်မှု, လူ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏လူသိများ neurobiology များအတွက်အကောင့်။ စစ်တမ်းကောက်ယူအဆိုပါလက်တွေ့ neurobiology စာပေအများစုကိုအထူးသ dopamine စနစ်၏, တိကျတဲ့ neurotransmitter စနစ်ကမူမမှန် implicates, ဒါပေမယ့်အဓိကအား neurodevelopmental လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် neurotransmitters အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ interaction ကလျစ်လျူရှု။ heritable အချက်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဖိစီးမှုအချက်များနှစ်ဦးစလုံးလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါစတင်ခြင်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
နိဂုံးချုပ်: လူမှုစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါလူကြီးတစ်ဦးအပြည့်အဝလျော်ကြေးပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါနာတာရှည် neurodevelopmental နာမကျန်းအဖြစ် conceptualized ရပါမည်။ ဒီရှုထောင့်ကနေအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။စိတ္တဇပဟေဋ္ဌိ
ထို့အပြင်လူမှုရေး phobia အဖြစ်လူသိများလူမှုစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, တစ်ဦးချင်းအခြားသူများစိစစ်နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကဲဖြတ်၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါသည်ခံစားရသောတစ်ခုအလွန်အကျွံကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြေအနေများ၏ရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းတစ်ဘုံနှင့်အကို disable စိတ်ရောဂါနာမကျန်းဖြစ်ပါတယ်။ က DSM-IV စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များ၏အသုံးအများဆုံးဖြစ်သော်လည်း, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အနည်းငယ် preclinical မော်ဒယ်များအပေါ်လက်တွေ့ neurobiological သုတေသနတစ်ခုရှားပါးမှုအခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဒီရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေအဘို့အကောင့်စေခြင်းငှါအများအပြား neurobiological ယန္တရားများအဆိုပြု၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, လူမှုရေးအခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်ရသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်များမျိုးကွဲအပေါ်အာရုံစိုက်။ ကျနော်တို့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းသုံးခု nonhuman မျောက်မော်ဒယ်များခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အတူစတင်။ Next ကိုကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏လက်တွေ့ neurobiology အတွက်မကြာသေးမီစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအစားတစ်ခု Episode က de Novo အရွယ်ရောက်ပြီးသူရောဂါ, အရေးကြီးသောကုသမှုသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ semantic ဂုဏ်ထူးတစ်နာတာရှည် neurodevelopmental နာမကျန်းအဖြစ် reconceptualized သင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်အတူလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးကျွန်တော်ထိတ်လန့်ရောဂါကိုနားလည်ရန်အသုံးပြုသည့်ကြွက်များတွင်အေးစက်-ကွောကျရှံ့သောပါရာဒိုင်း, စုံစမ်းစစ်ဆေးထက်ပိုပြီးပြဿနာဖြစ်ပါသည် (1), အဓိကအားဖြင့်အဆိုပါရောဂါ၏ interactive သဘာဝဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုလျော့နည်းအာမင်ကြောင့်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျနော်တို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပုံပေါ်ကြောင်းသုံး nonhuman မျောက်မော်ဒယ်များပြန်လည်သုံးသပ်။
လူယောက်ျားကဲ့သို့, မျောက်ဝံများလူမှုရေးဆက်ဆံရေးအပေါ်အထူးသဖြင့်မှီခိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဓာတ်ခွဲခန်း-based အပြုအမူလေ့လာတွေ့ရှိချက်အလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ Shively (2) ဓာတ်ခွဲခန်း-သျောအမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးလက်အောက်ငယ်သားများနှင့်ကြီးစိုးအတွက်အချက်အလက် nonhuman မျောက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမူအကျင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်လက်အောက်ကြောက်လ Dominic ထက်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်, စကင်ဖတ်ဖို့, တစ်ဦးတည်းအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအလက်အောက်ငယ်သား၏ဇီဝဗေဒလေ့လာမှုများ hyperactive hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှု, ချို့ယွင်း serotonergic လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ချို့ယွင်း dopaminergic neurotransmission ၏သက်သေအထောက်အထားများထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ACTH နဲ့စိန်ခေါ်မှုလေ့လာမှုမှာ, လူမှုရေးလက်အောက် HPA ဝင်ရိုး activation ထင်ဟပ်, cortisol hypersecreted ။ စုံစမ်းစစ်ဆေး (serotonin ၏ဖြန့်ချိခြင်းများကိုဖြစ်စေတတ်ထားတဲ့) ကို fenfluramine စိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်သည့်အခါ, ဓာတ်ခွဲခန်း-သျော cynomolgus မျောက်များလျှော့အလယ်ပိုင်း serotonergic လှုပ်ရှားမှုအကြံပြုထားတဲ့တုံး prolactin တုံ့ပြန်မှု, ပြ။ ဤရွေ့ကားမျောက်ကပိုလူမှုရေးအရမြင့်မား prolactin တုံ့ပြန်မှုပြသသောသူတို့အားထက်ဆုတ်ခွာနှင့် passive ခန္ဓာကိုယ်အဆက်အသွယ်လျော့နည်းအချိန်ကုန်ခဲ့ကြ (3)။ စုံစမ်းစစ်ဆေး tubero-infundibular dopamine လမ်းကြောင်းမှတဆင့် prolactin လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့ dopamine ရန်နှင့်အတူတစ်ဦး haloperidol စိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်သည့်အခါလျှော့ချ prolactin တုံ့ပြန်မှုလက်အောက်ငယ်သားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် (2)။ ဤရလဒ်တစ်လက်အောက်၌ဤလမ်းကြောင်းအတွက် postsynaptic dopamine receptors ၏ sensitivity ကို၏လျှော့ချအကြံပြုသည်။ အဆိုပါ neuroendocrine ဒေတာ, တစ်ဦး positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) လေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီ (4) လက်အောက်ငယ်သားများ striatal dopamine D ကိုလျော့နည်းသွားပြသ2 အဲဒီ receptor ပုံမှန်မဟုတ်သောအလယ်ပိုင်း dopaminergic neurotransmission, တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်ကွန်ပျူတာ tomography (SPECT) လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအတုယူတဲ့တွေ့ရှိချက်အကြံပြုသော binding (5) လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူသားမြားသညျ။
ရိုင်းများတွင်လူမှုရေးအရလက်အောက်ခံမြောကျမောငျးမမြိုး၏လေ့လာရေးအချို့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်တွေ့ရှိချက်တူတဲ့အခြား neuroendocrine မူမမှန်ထင်ရှားပါပြီ။ Hypercortisolemia အဖြစ် dexamethasone ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ချက်တားစီးဖို့ခုခံ, Sapolsky et al အစီရင်ခံခဲ့သည်။ (6) မြောကျမောငျးမမြိုး၌တည်၏။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်လက်အောက်ခံအထီးမြောကျမောငျးမမြိုး Dominic ထက်ငါအဆင့်ဆင့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်အနိမ့်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည် (7)။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့တိုတောင်းသောအရပ်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအကြားလေ့လာအသင်းအဖွဲ့ရှင်းပြမယ် (8).
ဒါကြောင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာသက်ဆိုင်အတိုင်းဤမော်ဒယ်အတော်ကြာအရေးကြီးသောန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ dexamethasone nonsuppression ၏ဒီဂရီအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါတစ်ခု HPA ဝင်ရိုးနှောင့်အယှက်မရှိသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (9)။ ဒုတိယအချက်မှာ fenfluramine ဖို့ prolactin တုံ့ပြန်မှုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာနှိုင်းယှဉ်လက်အောက်ခံမော်ဒယ်များအတွက်မတူ (10)။ ဤနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအကန့်အသတ်တစ်ခုမှာလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုရောဂါရှိသူများသည်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ရှောင်ရှားခြင်း၊ လက်အောက်ခံခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကိုပြုရန်“ ခဲယဉ်းသောကြိုးများ” ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးတုံ့ပြန်အချို့သော plasticity ။ သာဓကအားဖြင့်၊ လွှမ်းမိုးသော vervet မျောက်များသည်လက်အောက်ငယ်သားများထက်ပိုမိုများပြားသောသွေး serotonin ပမာဏရှိသော်လည်းအုပ်စုထဲမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအခါသူတို့၏ serotonin ပမာဏသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ (11)။ ထို့ကွောငျ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူမျောက်လက်အောက်ငယ်သားစိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်အတွက်အဓိကဆက်စပ်တွေ့ရှိချက် striatal dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင်း။ ပေါ်လာသော ဒီကမောက်ကမဖြစ်မှုလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် se နှုန်းလူမှုရေးလက်အောက်ငယ်သားတစ်ဦးအင်္ဂါရပ်များမှလည်းရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
အလားအလာအသုံးပြုမှုနောက်ထပ်မော်ဒယ် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလမ်နှင့် Paully (12) ခန့်မှန်းရခက် forage-ဝယ်လိုအားအခြေအနေများသူနာပြုမိခင်များဖော်ထုတ်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းမိမိတို့၏မွေးကင်းစမှမတည်မငြိမ်ပူးတွဲမှုပုံစံများ inducing နေဖြင့်လူမှုရေးကြောက်ခြင်းနှင့် nonassertiveness အဘို့ဤပုံစံတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ variable ကို-foraging-ဝယ်လိုအားအခြေအနေများအောက်တွင်ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များ, နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ, နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များမွေးလူမှုရေးကြောက်-ဥပမာ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်တည်ငြိမ်တိုးပြသခဲ့သည်, လူမှုရေးလက်အောက်ငယ်သား, ရန်၏ရှောင်ရှားတွေ့ဆုံ-နှင့်မျိုးစိတ်-ပုံမှန် Huddle လျော့နည်းသွား, နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆကျွေးမွေးပြုစုရန် နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များ (13)။ တစ်ဇီဝရှုထောငျ့မှ, ထို variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားမော်ဒယ်အောက်မှာမွေးဘာသာရပ်များ CSF corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်ကာလကြာရှည်တိုးပြ (14)အဆိုပါ dopamine metabolite homovanillic အက်ဆစ် (HVA), နှင့် serotonin metabolite 5-hydroxyindoleacetic အက်ဆစ် (5-HIAA) ။ သာ variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားမော်ဒယ်အောက်မှာမွေးဘာသာရပ်များအတွက် CRF အဆင့်ဆင့် CRF အဆင့်နှင့်နှစ်ဦးစလုံး dopaminergic နှင့် serotonergic စနစ်များအကြားတစ်ဦး functional ဖြစ်စေချိတ်ဆက်အကြံပြုသော HVA နှင့် 5-HIAA အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအပြုသဘောပတျသကျခဲ့ပါ (15)။ ထို့အပြင် variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားအုပ်စုတစ်စုအတွင်းမှာ CRF အဆင့်ဆင့်အတွက်ဆွေမျိုးတိုးကြီးထွားဟော်မုန်းအတွက်ဆွေမျိုးလျှော့ချဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့αမှ (GH) တုန့်ပြန်2 adrenergic agonist clonidine (16)yohimbine မှအဖြစ်ပုံကြီးချဲ့စိုးရိမ်စိတ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုα2 ရန် (17).
Neurochemically အဘယ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများအတွက်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်ထင်ရှားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်မြောက်မြားစွာ dopaminergic မူမမှန်မှုနဲ့အပြိုင်သော variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားအခြေအနေအောက်မှာမွေးမျောက်ဝံများအတွက် CSF အတွက်ပြောင်းလဲ dopaminergic metabolites ၏တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုအမူ, အ variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားအခွအေနေအောက်မှာမွေးသည့်မျောက်ဝံများအဘယ်အရာကို Kagan ကပြောပါတယ် et al တူ။ (18) “ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအမူအကျင့်အားတားဆီးခြင်း” ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသခဲ့သည့်ကလေးငယ်များအုပ်စုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤရွေ့ကားကလေးများစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုချဲ့ကားပြောဆိုမှုနှလုံးအရှိန်အရှိန်မြင့်မြင့်အစောပိုင်း - နံနက်တံတွေး cortisol အဆင့်ဆင့်နှင့်မြင့်မားသောစုစုပေါင်း norepinephrine လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြုအမူတားစီး၏အဆင့်ဆင့်ပြ။ ထို့ကြောင့်, variable-foraging- ဝယ်လိုအားမော်ဒယ်အစောပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဖိစီးမှု, အထူးသဖြင့်တစ် ဦး အကျိုးသက်ရောက်သောသဘောသဘာဝ၏ရိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးအရစိုးရိမ်ပူပန်ပရိုဖိုင်းကိုဆီသို့အပြုအမူနှင့် neurobiology ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ၎င်း၏အကြံပြုချက်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့အားဖြင့် CRF အဆင့်တိုးလာခြင်းနှင့် cortisol အဆင့်များကျဆင်းခြင်းအကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၏ neuroendocrine တွေ့ရှိချက်များအရစိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲသောစိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာရောဂါ (PTSD) နှင့်အတူလူနာ၏ပုံသဏ္mostာန်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ (19, 20).
တိရိစ္ဆာန်နှောင်ကြိုး & Models
သမိုင်းကြောင်းအရ, ပူးတွဲမှုအပြုအမူအတွက်လိုငွေပြမှုအများဆုံးနီးကပ်စွာ autistic မမှန်ခြင်းနှင့် schizoid ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်နှင့်အတူသဘောတရားဆက်စပ်မှုပါပြီ။ တကယ်တော့, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့် schizoid ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူလူနာအကြားတစ်ဦးကိုမကြာခဏ-မှတ်ချက်ချလက်တွေ့ဂုဏ်ထူးဆက်နွယ်မှုများနှင့်အခြားသူများကို attachment အဘို့အလိုဆန္ဒ၏ဒီဂရီ၌တည်ရှိ၏။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (နှင့်၎င်း၏အနီးကပ်ဆက်နွယ်သည့်ဝင်ရိုး II ကိုမူကွဲကိုရှောင်ကြဉ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ) နဲ့လူနာယေဘုယျအား autistic နှင့် schizoid ပုဂ္ဂိုလ်များယေဘုယျအားဖြင့်မသော်လည်း, အခြားသူများနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုများနှင့် attachment များကိုအလိုရှိကြသည်တွင်ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့အပြန်အလှန်၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောနေသောပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်မှတ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ပူးတွဲဖိုင်ကိုမော်ဒယ်များလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါကိုနားလည်အတွက်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြပြီမဟုတ်, ဤ attachment များကိုအလိုရှိကြသည်နှင့် Affiliate အပြုအမူတွေကင်းမဲ့နေသည်။ သို့သော်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအကြားမျိုးရိုးဗီဇလင့်များထွန်းသစ်စကို attachment neurobiology တစ် reexamination အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Smalley et al ။ (21) autistic probands ၏ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာသာရပ်များမှဆွေမျိုးလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါတစ်ခုတိုးလာပါသည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု (22) တစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မရှိသက်သေအထောက်အထားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏ပျော့ရှုထောင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျယ်ပြန့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ phenotype (အပါအဝင်အကြားတစ်ဦးချင်းစီအတွင်းရှိခဲ့သည်ပေမယ့် autistic probands ၏မိဘများ, Down ရဲ့ syndrome ရောဂါ probands ၏မိဘများထက်လူမှုရေး phobia ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ လူမှုရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှုနှင့်ကျပုံစံထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေ) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကယခင်ကအသိအမှတ်ပြုထက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါမှတိရိစ္ဆာန်ပူးတွဲမှု၏ neurobiology အလားအလာပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာစေသည်ဖြစ်သောပူးတွဲမှုတစ်ခု shared ဇီဝဗေဒမှထောက်ပြတာပါ။
မြောက်မြားစွာ neurotransmitter စနစ်များကိုအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူဘာသာရပ်များနှင့် preclinically ကို attachment နဲ့ဆက်နွယ်မှု၏မျောက်မော်ဒယ်များအတွက်ဆေးခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီ။ Raleigh နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ (23) အနိမ့် serotonin အဆင့်ဆင့်ရှောင်ရှားခြင်းရာထူးတိုးသော်လည်း serotonergic function ကို၏တိုးမြှင့်, မျောက်ဝံများအတွက်တိုးတက်လာသောလူမှုရေး Affiliate မှုကြောင့်ပြသသည်။ သီးခြားပေမယ့်ဆက်စပ်အလုပ်များတွင် CSF 5-HIAA ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအခမဲ့-အထိမျောက်ဝံများလျော့နည်းလူမှုရေးအရည်အချင်းကိုပြ CSF 5-HIAA ၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူမျောက်ဝံများထက်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးအုပ်စုများကနေအငယ်နှစ်အရွယ်တွင်ထွက်ခွာပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏ (24).
ဦးနှောက် opioid စနစ်ကမျောက်ဝံများနှင့်အခြားမျိုးစိတ်အတွက်ပူးတွဲမှုအပြုအမူတစ်ခုထိန်းညှိအဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခံရဖို့ပထမဦးဆုံး neurochemical system ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ nonhuman မျောက်ဝံများ၏တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ (25)၎င်းတို့၏မိခင်များနှင့်အခြားအုပ်စုတစ်စုအဖော်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူတည်ငြိမ်လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နေထိုင် 10 လူငယ်မျောက်များ naloxone တစ်ခု opiate ရန်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ naloxone လက်ခံရရှိအဆိုပါမျောက်ဝံများပိုပြီးဖြီးလိမ်းပုံကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံလုပ်နှင့်ပိုပြီးဖြီးလိမ်းပုံကိုလက်ခံရရှိနှင့်၎င်းတို့၏မိခင်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နီးကပ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Kalin et al ။ (26) သူတို့အားပေးသော naltrexone သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုတိုးမြှင့်သော်လည်း၎င်းတို့၏မိခင်များကနေခွဲပြီးနောက် nonhuman မျောက်မွေးကင်းစ၏မိသားစုတွေပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲလေ့လာသရုပ်ပြမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်နေသောနှစ်ဦးစလုံးမွေးကင်းစနှင့်မိခင်များ, စွဲလမ်းမှုအပြုအမူတွေအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးပြသသော။ က opiate လှုပ်ရှားမှုကြွက်များတွင် oxytocin ထိုးမြင့်တက်ခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ endogenous opioid လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြား Affiliate neurotransmitter စနစ်များအကြားရှုပ်ထွေး interrelationships ၏သက်သေအထောက်အထားရှိ၏ (27)။ Clinic, opioid အချိုးဖောက်ဆုံးလူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်အချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (28).
အဆိုပါ neurohormone oxytocin ကောင်းစွာစတင်တည်ထောင်ပေမယ့်မမိခင်အပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် pair တစုံဘွန်းဖြစ်ပါတယ် (29)အဖြစ် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်လူမှုရေးအပြန်အလှန်အတွက် (30)။ Insel နှင့် Winslow ထံမှမကြာမီကဒေတာ (29) oxytocin ချို့တဲ့နေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာမောက်စ်ကအထီးကျန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအနည်းငယ်သာထုတ်လွှတ်ခဲ့ပြီးလူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ သူတို့ကပူးတွဲ၏အာရုံကြောအလွှာ "ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental areaရိယာကနေနျူကလိယ accumbens မှ [dopaminergic] mesolimbic စီမံကိန်းများကဲ့သို့အားဖြည့်များအတွက်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမှ, လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု (olfactory, အာရုံနှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု) စုံတွဲသောသူတို့အားလမ်းကြောင်းများဖြစ်ကြောင်းယူဆ" prefrontal cortex "(စ။ 888) ။ ဒါဟာ dopaminergic neurotransmission ဦး နှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, Stein အဖြစ် (31) ထို့ကြောင့်အကြံပြုချက်သည် ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လူမှုဆက်ဆံရေး၏အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကဲဖြတ်သည့်စနစ် (များ) အတွင်းလည်ပတ်မှုမရှိခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်စေသည့်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် (စ။ ၁၂၈၀) ။ ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဗေဒအရဤမတူညီသောပူးတွဲမှုလမ်းကြောင်းများစွာသည်လူ့မိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေးနှောင်ကြိုး၏ရှုထောင့်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) မှမကြာသေးမီကပတ်သက်နေသည့်ဒေသတွင်း cingulate ကိုဖြတ်သန်းသွားသည် - မွေးကင်းစကလေးငယ်များ၏တုံ့ပြန်မှု (32)။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, တိရိစ္ဆာန်ကို attachment မော်ဒယ်များ oxytocin သာ ဆက်စပ်. အဒါပေမယ့်မတူညီ serotonergic, opioid နှင့် dopaminergic လမ်းကြောင်း။
သူတို့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်မတူညီသိမြင် misappraisals ရှင်းပြအတွက်မပြည့်စုံသော်လည်း, preclinical ပူးတွဲဖိုင်ကိုမော်ဒယ်များလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်မြင်ပြီထစ်အငေါ့လူမှုရေး Affiliate နားလည်သဘောပေါက်များအတွက်အသုံးဝင်သော Construction သည်နှင့်များ၏လက်တွေ့ neurobiology ၏အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေများအတွက်လမ်းညွှန်ပေး ရောဂါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, မျောက်ကို attachment neurobiology အတွက်ပွားအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုအထူးသဖြင့် neuroimaging အတွက်အလွန်ကျဲသည်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါဤတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုကဒီတစ်ကြိမ်မှာသေချာပေါက်ကန့်သတ်သည်။ (ကြည့်ရှုပါ t1 လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏ preclinical မော်ဒယ်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ဘို့။ )
Neuroplasticity, Neurogenesis နှင့်လူမှု Dominic
neurodevelopment အတွက်သုတေသန၏ပေါက်ကွဲသံထိုကဲ့သို့သောကြီးစိုးသို့မဟုတ်လက်အောက်ငယ်သားစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာတစုံတပါးကဲ့သို့, စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ယူပြီးနှင့်ထဲမှာ Vivo neuroimaging သို့မဟုတ် postmortem တစ်ရှူးနမူနာအားဖွငျ့က၎င်း၏ neurobiological ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင်လူ့ neurobiology အတွက် သာ. အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာဦးနှောက်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော cortex အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားဦးနှောက်ဒေသများအတွက် neurogenesis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, hippocampus, cerebellum နှင့် olfactory မီးသီးများ၏ထူးခြားတဲ့ plasticity အဘို့သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းနေသည် (33)။ သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် et al ။ (34) လူမှုရေးကြီးစိုးပါရာဒိုင်းကနေဆင်းသက်လာတစ်ခုတည်မြဲကြီးစိုး-လက်အောက်ခံဆက်ဆံရေးအတွက်သစ်ပင် shrews အတွက်သရုပ်ပြပြောင်းလဲ neuroplasticity (35)။ အထူးသသူမ၏အုပ်စုတစ်စုတစ်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံ unexposed ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လက်အောက်ခံသစ်ပင် shrews ၏ dentate gyrus ထုတ်လုပ်အသစ်ကဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုအတွက်လျင်မြန်စွာကျဆင်းပြသ (34)။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကိုပိုမိုမကြာသေးမီကသစ်ပင် shrews များအတွက်ကြီးစိုး-လက်အောက်ခံမော်ဒယ်၏ဆင်တူနေထိုင်သူတစ်ဦးကျူးကျော်ပါရာဒိုင်းတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ် အသုံးပြု. marmoset မျောက်ပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခဲ့သည် (36)။ ဤအချိန်တွင်ကျနော်တို့အစောပိုင်းလက္ခဏာနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူလူ့မွေးကင်းစ၏ဦးနှောက်အတွက် neuroplastic အပြောင်းအလဲများကို၏သဘောသဘာဝမသိရပါဘူး, အရှင်, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် granules ဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်း၏ဘာသာပြန်သက်ရောက်မှုတွေမသိနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှု granules အာရုံခံအလားအလာ hippocampal-မှီခိုသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုပြသထားပါတယ် (37) နှင့် granules အာရုံခံများ၏အရေအတွက်နောက်ဆက်တွဲလျှောက်လျော့နည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးပြောင်းလဲဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်း (37)။ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ glucocorticoids ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် hippocampal အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများ, (38)ဤသို့ granules ဆဲလ် neurogenesis တားစီးလိမ့်မယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတှငျကြှနျုပျတို့ hippocampal နှင့် cortical ဒေသများတွင်အလွန်အကျွံ glutamatergic ဂီယာဟာအလုပ်မဖြစ် circuitry ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်, နှင့်အောင်မြင်သောကုသ glutamatergic neurotransmission ပြုပြင်မွမ်းမံစဉ် neurogenesis ၏တားစီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အစေခံအံ့သောငှါ hypothesize ။
အများဆုံးတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ hippoampal ဖွဲ့စည်းရေးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဖိအားအဖြစ်ကောင်းစွာ cortical အာရုံခံကိုထိခိုက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (39)။ Neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော differential အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့် modulated ခံရဖို့လူသိများသောတွင် nerve growth factor, အဖြစ် neurotrophins ၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်မှီခိုနေကြ (40)။ တကယ်တော့, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ကုသအသုံးဝင်သောထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (SSRIs) သည်, hippocampus အတွက်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်၏စကားရပ်တိုးမြှင့်ဖို့လူသိများကြသည် (41, 42).
key ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ၏ထူးခြားပြောင်မြောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ plasticity ပေးထား, ဖွံ့ဖြိုးရေးများ၏အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ် circuitry delineating အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ် (43, 44)။ longitudinally, မကြာသေးမီကအလုပ် "တားစီး" အဖြစ်ခွဲခြားကလေးများသိသိသာသာအရေအတွက်ကငယ်ရွယ်သောလူကြီးအားဖြင့်ယေဘုယျလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် (45, 46)။ Kagan ကပြောပါတယ် (47) ဒုက္ခရောက်နေဖြစ်လာမယ့်အနိမ့်တံခါးခုံခဲ့ရပြီးမော်တော်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောလှုံ့ဆော်မှုဖို့နှိုးဆွတဲ့သူ4လအရွယ်မွေးကင်းစအစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အလားတူပင်အသက်အရွယ် 21,4နှင့် 5.5 နှစ်ပေါင်းမှာနောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်တွဲလညျပတျမှာဘယျလိုမှမကနျြရစျသူအ 7.5 လအတွင်းမှာအပြုအမူဘယျလိုမှအဖြစ်ဖော်ထုတ်ကလေးများ, အပြုအမူဘယျလိုမှမဟုတျသူကလေးများထက်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်မြင့်မားမှုနှုန်းပြသ (48)ယင်းတွေ့ရှိချက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်များအတွက်သီးခြားမဟုတ်ကြပေမယ့်။ ထင်းရူး et al နေဖြင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေတစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီအလားအလာလေ့လာမှု။ (43) ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေး phobia အကြားတစ်ဦးထက်ပိုတိကျတဲ့အသင်းအဖွဲ့, လူကြီးများအကြားတွင်မိသားစုလေ့လာမှုသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းတစ်ဦးတွေ့ရှိချက်အကြံပြုထားပါတယ် (49).
ကလေးများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါမှ neurobiological ဆက်စပ်မှုများ၏မှတ်ပုံတင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာတွေနဲ့အပြုအမူဘယျလိုမှကလေးများချိတ်ဆက်လက်တွေ့နှင့် epidemiological လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြကူညီပေးသည် (50)။ လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များဆုံးသိသာ neurobiological ဆက်စပ်မှုတုံ့ပြန်-မြင့်ဘယျလိုမှကလေးငယ်များအတွက်ဖျော်ဖြေဦးနှောက်အကြာတွင်လေ့လာမှုများပါပြီ (51, 52) နှင့်တိရစ္ဆာန်များတွင် (53)။ Davidson (52, 54) ကျန်ရစ် prefrontal cortex activation စိတ်ခံစားမှု-related ချဉ်းကပ်ဖို့ related ခံခဲ့ရသော်လည်းမွေးကင်းစနှင့်လူကြီးများအတွက်သရုပ်ပြထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းဆုတ်ခွာ-related စိတ်ခံစားမှု, လက်ျာတိုကျရိုကျဒေသ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မိန့်ခွန်းအောင်ထားချက်အရသည့်အခါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာညာဘက် anterior ယာယီနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal ဦးရေပြားဒေသများတွင် Active အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးပြသခဲ့သည် (52, 55)။ ဆက်စပ် preclinical အလုပ်မှာတော့ကြောက်စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက် EEG အသံသွင်း, အတော်လေးမြင့်မားသောမြင့်မားသော cortisol နှင့် CSF CRF ပြင်းအားညာဘက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြနှင့်ထို့ထက် ပို. ပြင်းထန်သောခုခံကာကွယ်တုံ့ပြန်မှု (53, 56)။ ဤအတွေ့ရှိချက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကွသျောလညျးသူတို့သ Rauch et al အတွက်အတော်လေးရောဂါ nonspecific ဖြစ်လိမ့်မယ်။ (57) လက်ျာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အခြားဒေသများအကြား, သုံးစိုးရိမ်စိတ် diagnoses (obsessive-compulsive ရောဂါ [OCD] PTSD နှင့်ရိုးရှင်းသော phobia) ကိုဖြတ်ပြီးတစ်ပေလက္ခဏာ-ဒေါသသည်ပါရာဒိုင်းအတွက်တိုးချဲ့ဖွင့်သုံးသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အမူအကျင့်တားစီးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအကြား epidemiological လင့်များဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဘုံဒေသဆိုင်ရာပွောငျးလဲခွငျးအားဖွငျ့အတညျပွုခံရဖို့ပေါ်လာပေမယ့်ထို့ကြောင့်, ဇီဝအသင်းအဖွဲ့များရောဂါ nonspecific ဖြစ်လိမ့်မယ်။
လူမှုတော့ပူပန် Disorder ၏မျိုးရိုးဗီဇ
, အမူအကျင့်တားစီးနှင့်ရှက်ကြောက်စိတ်အပါအဝင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်၎င်း၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမျိုးကွဲလူမှုရေးအားကြီးသောမိသားစုအခြေခံရှိသည်တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်, အဆိုပါရောဂါ၏မျိုးရိုးဗီဇလုံလောက်စွာလေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အများအပြားကအစောပိုင်းလေ့လာမှုများ (58, 59) တစ်မိသားစု link ကိုထူထောင်ပေမယ်သာအစဉ်အဆက်မျိုးကွဲများအတွက် (59)။ ဒါဟာတစ် proband လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏ရောဂါရှိပါတယ်လျှင်, နာမကျန်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ရာခိုင်နှုန်း 15% ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ agoraphobia နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် 10% တွေ့ရှိချက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်များအတွက်မြင်ပြီ 31% ထက်လျော့နည်းခဲ့သည့်ခဲ့သည် ရိုးရှင်း phobia နှင့်အတူ (49)။ နောက်ပိုင်းတွင်, ပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှု (60) အထွေထွေမျိုးကွဲသိသိသာသာ generalized လူမှုရေး phobic probands ၏ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများအကြား (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ကြိမ် သာ. ကွီးမွတျ) ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှု (61) လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလူနာများ၏ကလေးများသည်ဤရောဂါနှင့်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
monozygotic အမွှာအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများအတွက်အနိမ့်မျိုးဗီဇမာတိကာနှုန်းထားများ (62) မျိုးရိုးဗီဇယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်ထိတ်လန့်ရောဂါဘို့အကြံပြုအဖြစ် (1)အဘယ်အမွေဆက်ခံခံရဖို့ပုံပေါ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုလွယ်ကူစွာထိခိုက်မရောဂါကိုယ်နှိုက်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇအကြားတစ်ဦး Genomics စကင်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအလုပ်သမားမျှစနစ်တကျမျိုးရိုးဗီဇချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများယခုအချိန်အထိလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါဘို့ကောက်ယူကြပြီဖြစ်သော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများထိတ်လန့်ရောဂါအတှကျအဆဲဖြစ်ကြောင်း (63) နှင့် OCD (64)။ ထိုနည်းတူစွာ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်အများအပြား neurotransmitter စနစ်များများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျိုးဗီဇ၏မော်လီကျူးဗီဇလေ့လာမှုများ, အထူးသ serotonin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် dopamine အဲဒီ receptor နှင့်၎င်းတို့၏အမျိုးမျိုးသော Subtype, ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းရှာအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇများနှင့်အမူအကျင့်စရိုက်များအကြားအသင်းအဖွဲ့များ, အဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ (65, 66)လူမှုစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ phenotype မှသက်ဆိုင်ရာ -characteristics ။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက်မျိုးဗီဇနှင့်မိသားစုလေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့နို့စို့အရွယ်နေဆဲပေမယ့်ရောဂါငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျိုးကွဲများအကြားလင့်များရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြောင်း longitudinal လက်တွေ့ဒေတာကိုထောကျပံ့။
လူမှု Phobia ၏လက်တွေ့ Neurobiology
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် neurobiologist ဘို့နှစ်ခုမူလတန်း tools တွေကိုပိုပြီးမကြာသေးမီက, neuroimaging pharmacological စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါပြီ။ အဆိုပါလက်တွေ့ neurobiological စာပေဆန်းစစ်တှငျကြှနျုပျတို့ဖြစ်နိုင်လျှင်အနည်းငယ်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမယ့်, preclinical စမ်းသပ်ချက်ပုံတူပွားကြောင်းဒေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကြိုးစား။
စိန်ခေါ်မှုလေ့လာမှုများ monoamine (dopamine, norepinephrine) နှင့် indoleamine (serotonin) neurotransmission အတွက်မူမမှန်သက်သေပြပြီးပါပြီ။ အဆိုပါ serotonergic လေ့လာမှုများ, Tancer et al ၏။ (10) တစ်ဦးထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူရှာဖွေတာ, နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များမှဆွေမျိုးလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် fenfluramine တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီး cortisol တုံ့ပြန်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ Holland et al ။ (67) အဆိုပါ serotonergic စုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံတိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်တုံ့ပြန်မှု m-CPP, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမထင်ရှားတဲ့ neuroendocrine ပွောငျးလဲရှိခဲ့သည်။ dopamine function ကိုလေ့လာနေခုနှစ်, Tancer ရဲ့အုပ်စုတစ်စု (10) သုံးတဲ့အခါ dopaminergic function ကိုမဆိုမူမမှန်မတှေ့ lအဆိုပါ pharmacological စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖြစ် -dopa (ကြည့်ရှု F1 လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ dopaminergic မူမမှန်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်များအတွက် [68-72]) ။ ထိုကဲ့သို့သော CO အဖြစ်လေ့ထိတ်လန့်ရောဂါ၏လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေး,2, နို့တိုက်, pentagastrin နှင့် epinephrine, ယေဘုယျအားဖြင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်အတူလူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များသူတို့အကြားတစ်ဦးအလယ်အလတ်တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ (73, 74)။ ထင်းရူး et al နေဖြင့်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာ။ (75) CO အကြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမရှိခြင်းထင်ရှား2 sensitivity ကိုနှင့်ကလေးဘဝကိုလူမှုရေး phobia နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူထိတ်လန့်ရောဂါများအကြားအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့ရှာဖွေတာလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်သောကလေးဘဝလူမှုရေး phobia, (76)။ ကျနော်တို့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်ထိတ်လန့်ရောဂါတစ်ခုထပ်ပေမယ့်ကွဲပြား neurobiology အဲဒီမှာတည်ရှိဤကန့်သတ်လေ့လာမှုများကနေကောက်ချက်ချ။
လူမှု Phobia အတွက် Norepinephrine
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ hyperarousal ကတည်းက (flushing, tachycardia နှင့် tremulousness အားဖြင့်ထင်ရှား) လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါမှာပါဝင်နေတဲ့အလုပ်မဖြစ် circuitry အပေါ်အလင်းကိုသွန်းစေခြင်းငှါ, ထိုလူနာအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် function ကိုနားလည်သဘောပေါက်, ထိတ်လန့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အခြေအနေများတွင်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူလူနာတစ်ဦးဘုံလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Stein et al ။ (77) လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ, ထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်ကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦး orthostatic စိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့စိန်ခေါ်မှုမီနှင့်အပြီး norepinephrine မြင့်မားပလာစမာအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်သာမန်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလူမှုရေး phobia နှင့်အတူဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာပုံတူကူးယူခြင်း, တကယ်တော့ generalized လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူအုပ်စုတွင်ချို့ယွင်း parasympathetic (စာနာမဟုတ်) လှုပ်ရှားမှု၏အကြံပြုချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာသာရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၌ရှိ၏မခံခဲ့ရ (78).
ကန့်သတ်အချက်အလက်များကိုαကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ2 adrenergic ရန် yohimbine လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်တိုးပွားစေခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ plasma 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol ပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (79)။ ဆနျ့ကငျြ, Papp et al ။ (80) လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်သွေးကြောသွင်း epinephrine ထုံမွှန်းနှင့်တစ်ဦးတည်းသာ 11 လူနာထဲကတစ်ဦးတည်း plasma epinephrine အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ observable စိုးရိမ်စိတ်, ကြုံတွေ့ကြောင်းလေ့လာသည်။ အထူးသ, Tancer et al ။ (81) သွေးကြောသွင်းဖို့လျှော့ GH တုံ့ပြန်မှုလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်ပါးစပ်မဟုတ်, clonidine တစ်ခုα2 adrenergic agonist ။ clonidine ဖို့တုံး GH တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းထိတ်လန့်ရောဂါ, အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, နှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည် norepinephrine overactivity မှမရှိစေရန် functioning လျှော့ postsynaptic adrenergic-2 အဲဒီ receptor ကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။ တနည်းအား Coplan et al ။ (16) clonidine သို့မဟုတ်အခြား GH secretagogues ဖို့တုံး GH တုံ့ပြန်မှုကိုကြောက်ရွံ့သောသဘော-inducing neuropeptide CRF တစ်ခုတိုးလာအလယ်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါတွေးဆ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ကန့်သတ်ဒေတာရှိပါတယ်ပေမယ့်အချုပ်အား, အချို့သောလူနာဆေးခန်းလေ့လာတွေ့ရှိသည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ hyperarousal သည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏တစ်ဦးနောက်ခံ dysregulation bespeaks ။
ယနေ့အထိ Neuroimaging လေ့လာမှုများအဓိကအား Basal ganglia သို့မဟုတ် striatal ရောဂါဗေဒအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြနှင့်ဤဒေသများတွင် functioning ချို့ယွင်း dopaminergic ၏ပဏာမသက်သေအထောက်အထားပြသခဲ့ကြသည်။ ဤအသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်အကျိုးစီးပွား (လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက် dopaminergic လိုငွေပြမှု၏ဆေးခန်းကို အခြေခံ. သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းနောက်တော်သို့လိုက်F1) ။ Neuroanatomically, အ CNS အတွက်လေးခုအဓိက dopamine လမ်းကြောင်း၏, ထို mesocortical နှင့် mesolimbic (အနျူကလိယ accumbens အပါအဝင် ventral striatal) ၏အလုပ်မဖြစ်လမ်းကြောင်းပေမယ့်, tuberoinfundibular နှင့် nigrostriatal (dorsostriatal) လမ်းကြောင်းတစ်ခုယူဆရပြောင်အရေးပါမှုနှင့်အတူလူမှုရေး, စိုးရိမ်ပူပန်မှုအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာပေါ်လာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပုံရိပ်လေ့လာမှုများဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်လုံလောက်သော Spatial resolution ကိုမပေးပါဘူး။
Tiihonen et al နေဖြင့်တစ်ဦးကလေ့လာမှု။ (82) အဆိုပါ striatum သို့ dopaminergic innervation တစ်လိုငွေပြမှုအကြံပြုထားတဲ့သာမန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် SPECT အပေါ် striatal dopamine reuptake က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကျဆင်းခြင်း, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာလျှော့ချ dopamine reuptake site ကိုသိပ်သည်းဆလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလူနာများ၏ striatum အတွက် dopaminergic synapses နှင့်အာရုံခံတစ်ခုခြုံငုံသေးငယ်အရေအတွက်ကိုထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက [123ကျွန်မ] iodobenzamide ([123Schneier et al ငါ] IBZM) SPECT လေ့လာမှု။ (5)လျှော့ယုတ် D ကိုပြသရာ2 အဆိုပါ striatum အတွက် binding အဲဒီ receptor, အ striatum အတွက် dopaminergic hypofunction ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ သို့သော်ဤအစီရင်ခံစာ၏အနက်ကို Tiihonen et al အားဖြင့်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ခက်ခဲသည်။ ၏ binding dopamine Transporter လျော့နည်းသွားကြောင်းအတွက် SPECT radiotracer ၏စည်းနှောင်အလားအလာလျော့နည်းသွား [123ကျွန်မ] IBZM လည်းရောင်ပြန်ဟပ်နိုင် တိုးမြှင့် : D ၏အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်အခမဲ့ dopamine ၏အဆင့်ဆင့်2 receptors, D ကို၏ပြောင်းလဲဆှဖှေဲ့2 dopamine များအတွက် receptors, သို့မဟုတ်ဤအချက်များအချို့ကိုပေါင်းစပ်။ ဒါဟာမကြာသေးခင်က Synaptic dopamine အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီးနောက် binding dopamine တိုင်းတာခြင်း SPECT သို့မဟုတ်ပေလေ့လာမှုများဖြစ်ကောင်းရိုးရှင်းသောစည်းနှောင်ထေိုမော်ဒယ်များအားဖြင့်အဘို့မှတ်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီး receptors ၏ subcellular ဖြန့်ဖြူးပြောင်းလဲမှုများပါဝင်စေခြင်းငှါ, စောဒကတက်ခဲ့သည် (83)။ : D အတွက်ကှဲလှဲ၏အမှန်စင်စစ်အများဆုံး2 binding အဲဒီ receptor endogenous dopamine အဆင့်ဆင့်ဟာကှဲလှဲ၏ခန့်သာ 10% -20% (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, မာ့ခ် Laruelle, MD 2001) အားအထောက်အကူပြုသော်လည်းကြောင့်အဲဒီ receptor စကားရပ်မြားတှငျပွောငျးလဲဖို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အထူးသ dopamine စနစ်များကိုအာရုံစိုက်မရသူအများစုမှာ neuroimaging လေ့လာမှုများ Basal ganglia နှင့် cortical မူမမှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်း, တဦးတည်းလေ့လာမှုပါဝင်ပတ်သက်မှု amygdala အကြံပြုသည်။ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy (Mrs) ကိုသုံးပြီး, Davidson et al ။ (84) choline နှင့် Creatine သည် signal ကို-to-ဆူညံသံပု subcortical အတွက်အချိုး, thalamic နှင့် caudate ဒေသများရှိတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအစီရင်ခံအဖြစ်လျှော့ချ Nဖြစ်နိုင်သမျှအာရုံခံကျုံ့ခြင်းနှင့်ယိုယွင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သော cortical နှင့် subcortical ဒေသများတွင် -acetylaspartate signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုး။ ပိုပြီးမကြာသေးမီ Mrs လေ့လာမှုများ metabolites များ၏အချိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသကဲ့သို့ signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးများနှင့်ကန့်သတ် Spatial resolution ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤလေ့လာမှု၏မှတ်သားလောက်န့်အသတ်ခဲ့ကြသည် (85)။ Potts et al ။ (86) လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာပုံမှန်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များထက်အိုမင်းနေစဉ်အတွင်း putaminal volumes ကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကျဆင်းခြင်းခဲ့ကြောင်းအခြား Mrs လေ့လာမှုမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (CBF), Stein နှင့် Leslie ၏လေ့လာမှုများအတွက် (87) မည်သည့် posited subcortical မူမမှန်ဇီဝြဖစ်အနားယူမထိခိုက်စေမည်အကြောင်းညွှန်ပြပေးသော, SPECT အပေါ်လူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအကြားမျှ Basal ဇီဝဖြစ်စဉ်နှောက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းလောင်း et al ။ (88)တစ်လက္ခဏာ-ဒေါသလေ့လာမှုမှာ H ကိုအားဖွငျ့တိုင်းတာ215အို-တံဆိပ်ကပ်ပေ, စိုးရိမ်ပူပန်-related အပြောင်းအလဲများကိုတွေရဲ့ array အစီရင်ခံပေမယ့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါမှတိကျသောအပြောင်းအလဲများညာဘက် dorsolateral prefrontal cortex နဲ့ဘယ်ဖက် parietal cortex အတွက်တိုးချဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CSF ပါဝင်သည်ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြာသေးခင်က fMRI လေ့လာမှု (89) လူနာအလားအလာကိုကွောကျရှံ့-သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦး hypersensitive amygdala ၏မျိုးဆက်အကြံပြုခြင်း, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ pathophysiology အတွက် amygdala ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ ဤလေ့လာမှု၌, ကြားနေမျက်နှာလှုံ့ဆော်မှုစိုးရိမ်စိတ်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြားနေမျက်နှာများ, အန္တရာယ်ရှိသောမဟုတ်ခဲ့အသိပညာရှိနေသော်လည်းနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လူနာနှစ်နိုင်ငံ သာ. ကြီးမြတ် amygdala လှုပ်ရှားမှုရူးနှမ်း။ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ထုတ်ယူနှင့် amygdaloid activation အကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးဟာမရှင်းလင်းဖြစ်၏ သို့သော်ဒီပဏာမလေ့လာမှုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက် amygdala တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အဲဒီမှာအနည်းငယ်ပုံတူကူးယူ neuroimaging လေ့လာမှုများလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့် ပတ်သက်. ယနေ့အထိဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်အချက်အလက်များ၏ဆုံအရှင်ဝေး Basal ganglia အဆောက်အဦများ, အ amygdala နှင့်မတူညီ cortical ဒေသများ implicates ။ အဆိုပါ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် D ကို၏ SPECT လေ့လာမှုများ2 အဆိုပါ striatum အတွက်အဲဒီ receptor အရှင်ဝေးအနိမ့် dopamine innervation တစ်ဦးအယူအဆအတည်ပြုအတွက်အပြီးအပြတ်ကောက်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပေ: D ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဖြစ်မကြာမီကအစပျိုး,2 အဲဒီ receptor agonist ligand (90), neurotransmitter-D ကိုတိုက်ရိုက်ပြဌာန်းခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့2 အဲဒီ receptor interaction က, အလားအလာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၌ဤအဲဒီ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏ neurobiology နှင့် ပတ်သက်. အများအပြားအဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်စတင်မယ့်နာတာရှည် neurodevelopmental နာမကျန်းအဖြစ် conceptualized သင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခိုင်အမာပေးထားအများအပြားကိစ္စများထပ်မံစုံစမ်းရေးလိုအပ်သည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏အစောပိုင်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု၏အသုံးပြုမှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုများနှင့်၎င်း၏ comorbid မမှန်ခြင်းနှင့်ကလေးဘဝကိုရှေ့မရှိအသိပညာရှိသည်။ ကလေးဘဝလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါမကြာခဏ generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူ comorbid ဖြစ်ပါတယ် (91)ကို၎င်း, နာမကျန်းဤ comorbid ပုံစံများကိုထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအသင်းအဖွဲ့များ (92)။ အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အတူအောင်မြင်စွာကုသလူနာဓာတ်ခွဲခန်း neurobiological နှင့် neuroimaging အစီအမံများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် comorbid လူမျိုးကွဲဖြတ်ပြီးကုသမှု Response ၏စမ်းသပ်မှုအလိုတခုတည်းအဖြစ်သာလူကြီးအတွက်စီမံခန့်ခွဲသူကိုအောင်မြင်စွာကုသလူနာအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအလယ်တန်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလေ့လာမှုများအပြုအမူဘယျလိုမှသားသမီးများ၏ longitudinal လေ့လာမှုများ၏သဘာဝ extension ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒုတိယအချက်မှာထိုသို့သော amygdala နှင့် striatum, နှင့် cortex နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ interaction က, monoaminergic စနစ်များကွှနှင့် hippocampus အဖြစ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အရေးကြီးသောဦးနှောက်ဒေသများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiology ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှု, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်ပေသည်။ ဒီရည်မှန်းချက် neurodevelopmental မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနမှ Related ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်လူမှုစိုးရိမ်စိတ် phenotype များအတွက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဗီဇပစ်မှတ်ထားကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လူမှုရေးအရစိုးရိမ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မျိုးဗီဇအားနည်းချက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုများအကြားအပြန်အလှန်၏ကန့်သတ်နားလည်မှုရှိသည်။ အဆိုပါ variable ကို-forage-ဝယ်လိုအားအခွအေနေအောက်မှာကြီးပြင်း primates သော cross-မြှင့်တင်ရေး Paradigm ကျပန်းလူမှုရေးအရဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်လူမှုရေးအရအရည်အချင်းမိခင်များစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုဗီဇဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသော pernicious အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုဖြေကြားကူညီပေးနိုငျဖြစ်စေ၏အမျိုးအနွယ်အားတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် MRS ပုံရိပ်သည် neurutransmitter စနစ်များကိုလေ့လာရန်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများတွင် glutamatergic system ကဲ့သို့အာရုံမစိုက်နိုင်ပါ။ preclinical ကြွက်မော်ဒယ်များ prefrontal cortical efferents, တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် thalamic အရေးပါ efferents အားဖွငျ့, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယမှဖြစ်ပေါ်သော "ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်" neurocircuitry ၏အာရုံခံနှိုးဆွ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ် glutamatergic system ကိုသုံးပါသည်ဟုဆန့်ကျင်ဘက် အဆိုပါ stria terminalis (93, 94)။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများ hippocampal အတွက်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါ, (38) နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများ။ ဒီအလငျး၌, glutamatergic neurotransmission attenuate ကြောင်းအေးဂျင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ဆက်စပ် concomitant ထဲကဓာတုပစ်စညျးကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ SSRIs သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောင်မြင်သောဒီရောဂါကုသမှုအတွက်ပါပြီကတည်းက glutamatergic ရန်၏လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, မျက်ခြေမပြတ်စေခြင်းငှါ။ Mrs လည်းလှပသောမကြာသေးမီက Rosenberg က et al အားဖြင့်စူးစမ်း, ထိုကဲ့သို့သော serotonin နဲ့အချိုမှုအကြားအပြန်အလှန်အဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေး Vivo အတွက် neurotransmitter interaction ကစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုပါတယ်။ (95) ကလေးအထူးကု OCD ၌တည်၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ neurobiology ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု၏အရေးပါသောန့်အသတ်တွေ့ရှိချက်စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စိုးရိမ်စိတ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်တစ်တုံ့ပြန်မှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့မရံ (ဆိုလိုသည်မှာ HPA ဝင်ရိုး) ရောဂါဗေဒထင်ရှား၏, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏လက်တွေ့ neuroendocrinology လူကြီးတစ်ဦးအပြည့်အဝလျော်ကြေးပြည်နယ်အကြံပြုကြောင်းအရေးပါမှုသည်။ ဒီအလငျး၌ပြုလုပ်တွေ့ရှိချက်များကိုဆက်လက်ရှိနှင့်ပြီးသောသူတို့သည်နာမကျန်း၏သင်တန်းကျော်ကိုပြောင်းလဲထားတဲ့ neuroendocrine မှန်းနိုင်ရန်အတွက်ဝေးလံသောစတင်ခြင်းနှင့်အတူလူနာသာရှိပြီးပြည်ပမှလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏လတ်တလောစတင်ခြင်းနှင့်အတူလူနာလေ့လာဖို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဆနျ့ကငျြဘလွှတ်အတွက်လူနာနှိုင်းယှဉ်တက်ကြွလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူနာလေ့လာဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစားထိုးဖြစ်ရပ်ဆန်း၏တစ်ဦးထက်ပိုသောသန့်စင်ပြီးနားလည်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါသို့ပေမယ့်ထင်ရှားတဲ့ neuroendocrine မူမမှန်တခြားစိတ်ရောဂါမမှန်သို့မသာတန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
ဇူလိုင်လ 13, 2000 လက်ခံရရှိ; တည်းဖြတ်မူဇန်နဝါရီလ 10, 2001 လက်ခံရရှိ; ဇန်နဝါရီလ 18, 2001 လက်ခံခဲ့သည်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ, စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဦးစီးဌာနများနှင့်လက်တွေ့ Psychobiology, သမားတော်များနှင့်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏ကောလိပ်, ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကနေ။ ဒေါက်တာ Mathew, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, သမားတော်များနှင့်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏ကောလိပ်, ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်, 1051 Riverside မှဒေါက်တာ, Box ကို 84, နယူးယောက်, NY 10032 လိပ်စာပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများ; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (e-mail,) ။ NIH နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ရန်ပုံငွေ (ဒေါက်တာ Coplan မှ) MH-00416 ပေးရန် Clinician များအတွက်ကြောက်လန့်များ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်အဘို့အ MH-58911 နှင့် Center ကပေးသနားတော်မူခြင်းနှင့်တော့ပူပန် MH-00416 နှင့် (ဒေါက်တာ Gorman မှ) MH-01039 ပေးအပ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဆုပေးပွဲ , Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်လူငယ်သုတေသနဆုကိုနှင့် (ဒေါက်တာ Mathew ရန်) တစ်ဦးစိတ်ရောဂါ Institute မှသုတေသနပံ့ပိုးထောက်ပံ့ငွေအပေါ်သုတေသနနှင့်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့။ အဆိုပါစာရေးဆရာကသူ့ပံ့ပိုးမှုများကိုမာ့ခ် Laruelle, MD ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gorman JM, Kent JM, Sullivan က GM က, Coplan JD: ထိတ်လန့်ရောဂါ Neuroanatomical အယူအဆ, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 157: 493-505
Shively, CA: လူမှုလက်အောက်ငယ်သားစိတ်ဖိစီးမှု, အပြုအမူ, နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို cynomolgus မျောက်တွေကိုအလယ်ပိုင်း monoaminergic function ကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 44: 882-891
Botchin ကို MB, Kaplan JR, Manuck SB, မန်း JJ: fenfluramine စိန်ခေါ်မှုမှမြင့်မားသော prolactin နသာရှိပြီးပြည်ပမှအနိမျ့: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး cynomolgus မျောက်များအတွက်အမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှု၏အမှတ်အသား။ Neuropsychopharmacology 1993; 9: 93-99
Grant က ka, Shively, CA, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Morton TE, Gage, HD, Mach RH အ: striatal dopamine အပေါ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း Effect: D2positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအကဲဖြတ် cynomolgus မျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ synapses 1998; 29: 80-83
Schneier FR, Liebowitz MR, ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Zea-ပှနျး Y ကို, လင်း SH, Laruelle M က: အနိမျ့ dopamine: D2လူမှုရေး phobia အတွက်အလားအလာ binding အဲဒီ receptor ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 157: 457-459
Sapolsky RM, Albert SC, Altmann J ကို: Hypercortisolism ရိုင်းမြောကျမောငျးမမြိုးတို့တှငျလူမှုရေးလက်အောက်ငယ်သားသို့မဟုတ်လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 54: 1137-1143
Sapolsky RM, Spencer EM: ငါလူမှုရေးအရလက်အောက်ခံအထီးမြောကျမောငျးမမြိုးအတွက်နှိမ်နင်းနေသည်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်။ နံနက် J ကို Physiol 1997; 273 (4, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 2): R1346-R1351
Stabler B, Tancer ME, Rance J ကို, Underwood LE: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလစ်လပ်ကြီးထွားဟော်မုန်းရှိနသောသူလူကြီးများအတွက်လူမှုရေး phobia နှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်အဘို့သက်သေသာဓက။ စိုးရိမ်စိတ် 1996; 2: 86-89
Uhde TW, Tancer ME, Gelernter CS, Vitonne BJ: လူမှုရေး phobia အတွက်ပုံမှန်ဆီးအခမဲ့ cortisol နှင့် postdexamethasone cortisol: ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းမှနှိုင်းယှဉ်။ J ကို disorders 1994 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု; 30: 155-161
Tancer ME, စာပို့သမား RB, Stein ကို MB, Mason ဆို GA, Carson SW, ရွှေ RN: အထွေထွေလူမှုရေး phobia အတွက် monoaminergic စနစ်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် Neuroendocrine Response ။ စိုးရိမ်စိတ် 1994-1995; 1: 216-223
Raleigh MJ, McGuire MT, Brammer GL, Yuwiler ဖြေမျောက်သွေး serotonin ပြင်းအားအပေါ်လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychol 1984; 41: 405-410
ဘလမ် LA က, Paully GS: မိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေးအပြုအမူအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုချက်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြား၏ဆိုးကျိုးများ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ 1984; 55: 305-314
Andrews ကမီဂါဝပ်, ဘလမ် LA က: Primatology ယနေ့တွင်အတွက် differential မွေးဘောနက်မျောက်များအတွက် Dominic နှင့်လူမှုရေးအရည်အချင်းကို: နိုင်ငံတကာ Primatological Society ရဲ့ကွန်ဂရက် XIIIth ။ Ehara အေအမ်စတာဒမ်, Elsevier, 1991, စစ 347-350 တည်းဖြတ်
Coplan JD, Andrews ကမီဂါဝပ်, ဘလမ် LA က, Owen MJ, Gorman JM, Nemeroff သမဝါယမ: အစောပိုင်းဘဝဖိအားထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် corticotropin-releasing အချက်၏ cerebrospinal fluid ကိုပြင်းအားများ Persistent မြင့်တက်: ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များ၏ pathophysiology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 1996; 93: 1619-1623
Coplan JD, Trost R ကို, Owen MJ, Cooper က T က, Gorman JM, Nemeroff သမဝါယမ, ဘလမ် LA က: ကြိုးကိုင် forage အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့မိခင်များအားဖြင့်ကျွေးမွေးပြုစုအရွယ်ရောက်မျောက်ဝံများအတွက် somatostatin နှင့် biogenic Amin ၏ Cerebrospinal အရည်ပြင်းအား။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 55: 473-477
Coplan JD, Smith က ELP, Trost RC, Scharf BA, Altemus M က, Bjornson L ကို, Owen MJ, Gorman JM, Nemeroff သမဝါယမ, ဘလမ် LA က: ဆိုးရွားစွာမွေးငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျောက်ဝံများအတွက် clonidine မှကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု: အမှတ်စဉ် cerebrospinal fluid corticotropin-releasing မှကြားဆက်ဆံရေး အချက်ပြင်းအား။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 2000; 95: 3-102
ဘလမ် LA က, Coplan JD, Friedman က S, Gorman JM, Andrews ကမီဂါဝပ်: ဆိုးရွားသောအစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများအရွယ်ရောက်ပြီးသူမျောက်ဝံများအတွက် noradrenergic နှင့် serotonergic လည်ပတ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1994; 35: 221-227
Kagan ကပြောပါတယ် J ကို, Reznick JS, Snidman N ကို: အမူအကျင့်တားစီး၏ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်စိတ်ပညာ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ 1987; 58: 1459-1473
Yehuda R ကို: Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ Psychoneuroendocrinology ။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်အမေရိက Am 1998; 21: 359-379
Southwick S က, Krystal J ကို, မော်ဂန်ကို C, ဂျွန်ဆင် D ကို, နက်ဂျီ L ကို, Nicolas တစ်ဦးက, Heninger, G, Charney: D: posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သော noradrenergic function ကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1993; 50: 266-274
Smalley SL, McCracken J ကို, Tanguay P ကို: Autism, အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်ခြင်း, လူမှုရေး phobia ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ 1995; 60: 19-26
Piven J ကို, Palmer က: P: စိတ်ရောဂါရောဂါနှင့်ကျယ်ပြန့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ phenotype: မျိုးစုံ-ဖြစ်ပွားမှုအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာမိသားစုများတစ်မိသားစုလေ့လာမှုကနေသက်သေအထောက်အထား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 156: 557-563
Raleigh MJ, Brammer GL, McGuire MT: အမျိုးသားကြီးစိုး, serotonergic စနစ်များနှင့် vervet မျောက်တွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှု (Cercopithecus aethiops sabaeus) ။ prog Clin Biol Res 1983; 131: 185-197
Mehlman PT, Higley JD, Faucher ငါ Lilly AA ကို, Taub DM, Vickers J ကို, Suomi SJ, Linnoila M က: လူမှုရေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-အထိမျောက်ဝံများအတွက်ထွက်ခွာသွား၏အချိန်ကိုက်နှင့်အတူ CSF 5-HIAA အာရုံစူးစိုက်မှု၏ညမညသဘောတရား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1995; 152: 907-913
Schino, G, Troisi ဖြေလူငယ်မျောက်များအတွက် Opiate အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့: သူတို့၏မိခင်နှင့်အုပ်စုသည်အပေါင်းအဘော်နှင့်အတူ Affiliate interaction ကအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res 1992; 576: 125-130
Kalin နယူးဟမ်းရှား, Shelton ဟာအရှေ့တောင်, Lynn DE: မိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေးမျောက်ဝံများအတွက် Opiate စနစ်များကိုပြန်လည်ဆုံဆည်းစဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောအဆက်အသွယ် coordinate ။ Psychoneuroendocrinology 1995; 20: 735-742
Uvnas-Moberg ငွေကျပ်: oxytocin အပြုသဘောလူမှုရေးအပြန်အလှန်နဲ့စိတ်ခံစားမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ Psychoneuroendocrinology 1998; 23: 819-835
Grenyer BF, ဝီလျံ, G, ဆွစ်ဖ် W က, Neill အို: ကုသမှုရှာကြံ opioid အသုံးပြုသူများသည်လူမှုရေး-အကဲဖြတ်စိုးရိမ်စိတ်၏ပျံ့နှံ့။ int J ကိုစွဲ 1992; 27: 665-673
Insel TR, Winslow JT: လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology, စိတ်ရောဂါ၏ Neurobiology ၌တည်၏။ Charney DS, Nestler EJ, Bunney BS တည်းဖြတ်။ နယူးယောက်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, 1999, စစ 880-890
Winslow JT, Insel TR: ရှဉ့မျောက်များ၏အားလုံးအတွက်လူမှုအဆင့်အတန်းကိုဗဟို oxytocin အုပ်ချုပ်မှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience 1991; 11: 2032-2038
Stein ကို MB: လူမှုရေး phobia အပေါ် Neurobiological အမြင်များ: ဆက်နွယ်မှုကနေသတ္တဗေဒရန်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 44: 1277-1285
Lorberbaum JP, Newman က JD, Dubno JR, Horwitz AR, Nahas Z ကို, Teneback CC ကို, Bloomer CW, Bohning DE, ဗင်းဆင့် D ကို, ဂျွန်ဆင် MR, Emmanuel N ကို, Brawman-Mintzer အိုစာအုပ် SW, Lydiard RB, Ballenger JC, ဂျော့ခ်ျက MS: မွေးကင်းစကလေးအော်ဟစ်တုံ့ပြန်မိခင်များလေ့လာဖို့ fMRI အသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ပူပန် 1999 စိတ်ကျရောဂါ; 10: 99-104
သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, Tanapat P ကို: စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် hippocampal neurogenesis ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 46: 1472-1479
သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, McEwen BS, Tanapat P ကို, Galea Lam, Fuchs အီး: အအရွယ်ရောက်ပြီးသူသစ်ပင် shrew ၏ dentate gyrus အတွက် Neurogenesis စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် NMDA အဲဒီ receptor activation နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ J ကို neuroscience 1997; 17: 2492-2498
von Holst: D: သစ်ပင်-shrew အတွက်လူမှုစိတ်ဖိစီးမှု: ၎င်း၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ဇီဝကမ္မနှင့် ethological အကျိုးဆက်များ, Prosimian ဇီဝဗေဒ၌တည်၏။ မာတင် RD, ဒို GA, Watlker AC အနေဖြင့် edited ။ Philadelphia တွင်, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ 1972, စစ 389-411
သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, Tanapat P ကို, McEwan BS, Flugge, G, Fuchs အီး: အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျောက်များ၏ dentate gyrus အတွက် granules ဆဲလ်ရှေ့၏ပြန့်ပွားစိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်လျော့နေသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 1998; 95: 3168-3171
သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, ရိဗ် AJ, Fallah M က, Tanapat P ကို, Fuchs အီး: အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟောင်းကိုကမ္ဘာကမျောက်ဝံများအတွက် Hippocampal neurogenesis ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 1999; 96: 5263-5267
Moghaddam B, Bolinao အဘိဓါန် M က, Stein-ဘီရန်း B, Sapolsky R ကို: Glucocorticoids အဆိုပါ hippocampus အတွက် extracellular စုဆောင်းခြင်းသွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုဖျန်ဖြေ။ J ကို Neurochem 1994; 63: 596-602
Stewart က J ကို, Kolb B ကို: ကြွက်များတွင် cortical အထူနှင့် asymmetry အပေါ်မွေးကင်းစကလေးများ gonadectomy နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Biol 1988; 49: 344-360
Schoups AA ကို, Elliott သည် RC, Friedman WJ, Black ကခလရ: NGF နှင့် BDNF differential ဖွံ့ဖြိုးဆဲ geniculocortical လမ်းကြောင်းအတွက်အမြင်အတွေ့အကြုံများက modulated နေကြသည်။ Dev မှဦးနှောက် Res 1995; 86: 326-334
Nibuya M က, Nestler EJ, Duman သည် RS: နာတာရှည်လက္ခဏာအုပ်ချုပ်ရေးကြွက် hippocampus အတွက်ပရိုတိန်း (CREB) binding စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience 1996; 16: 2365-2372
Duman RS, Heninger ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Nestler EJ: စိတ်ကျရောဂါ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာသီအိုရီ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 54: 597-606
ထင်းရှူး DS, Cohen ကို P ကို, Gurley: D, Brook JS, Ma Y ကို: အစောပိုင်း-လူကြီးစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 55: 56-64
ရို JB, Schulkin J ကို: ပုံမှန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် မှစ. ရောဂါဗေဒစိုးရိမ်ပူပန်ရန်။ Psychol ဗြာ 1998; 105: 325-350
Mick MA, Telch MJ: ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အမူအကျင့်တားစီး၏လူမှုစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်သမိုင်း။ J ကိုပူပန် disorders 1998; 12: 1-20
Schwartz အီး, Snidman N ကို, Kagan ကပြောပါတယ် J ကို: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ဘယျလိုမှစိတ်ထားတစ်ခုရလဒ်ကိုအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 38: 1008-1015
Kagan ကပြောပါတယ် J ကို: စိတ်ထားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဖို့တုံ့ပြန်မှု။ ကလေးသူငယ် Dev မှ 1997; 68: 139-143
Hirshfeld DR, Rosenbaum JF, Biederman J ကို, Bolduc EA ၏, Faraone SV, Snidman N ကို, Reznick JS, Kagan ကပြောပါတယ် J ကို: တည်ငြိမ်မူအကျင့်တားစီးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 31: 103-111
Fyer အဘိဓါန် AJ, Mannuzza S ကိုချပ်မန်း TF မာတင် Ly, Klein DF: phobic မမှန်များ၏မိသားစုစုစည်းမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1995; 52: 564-573
Kerr က M, Tremblay RE, Pagani L ကို, Vitaro က F: Boys ရဲ့အမူအကျင့်တားစီးနောက်ပိုင်းတွင်သက်ငယ်ပြစ်မှုများ၏အန္တရာယ်ကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 54: 809-816
Calkins S က, Fox က N ကို, မာရှယ် T က: ဘယျလိုမှနှင့် uninhibited အပြုအမူ၏အပြုအမူနှင့်ဇီဝကမ္မ antecedents ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ 1996; 67: 523-540
Davidson R ကို: အချိုးမညီဦးနှောက် function ကို, ကိုထိခိုက်စတိုင်နှင့် psychopathology: အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံနှင့် plasticity ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ dev Psychopathol 1994; 6: 741-758
Kalin နယူးဟမ်းရှား, Larson ကို C, Shelton ဟာအရှေ့တောင်, Davidson RJ: အချိုးမညီတိုကျရိုကျဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု, cortisol နှင့်မျောက်တွေကိုအတွက်ကြောက်စိတ်ထားနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူ။ ပြုမူနေ neuroscience 1998; 112: 286-292
Davidson R ကို: Emotion နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေစတိုင်: hemisphere အလွှာဟာ။ Psychol သိပ္ပံ 1992; 3: 39-43
Davidson RJ, မာရှယ် JR, Tomarken AJ, Henrique JB: တစ် phobic စောင့်နေချိန်မှာ: အများပြည်သူစကားပြော၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းလူမှုရေး phobics အတွက်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်လျှပ်စစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 47: 85-95
Kalin နယူးဟမ်းရှား, Shelton ဟာအရှေ့တောင်, Davidson RJ: Cerebrospinal အရည် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းပမာဏကြောက်စိတ်ထားနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများနှင့်အတူမျောက်တွေကိုခြီးမွှောကျနေကြသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 47: 579-585
Rauch SL, ဗေ့ခ်ျ CR, Alpert မိုင်, Fischman AJ, Jenike MA: စိုးရိမ်စိတ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်လက္ခဏာဒေါသသုံးပြီးသုံးမမှန်၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 42: 446-452
Fyer အဘိဓါန် AJ, Mannuzza S ကိုချပ်မန်း TF, Liebowitz MR, Klein DF: လူမှုရေး phobia ၏တစ်ဦးကတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးမိသားစုလေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1993; 50: 286-293
Mannuzza S က, Schneier FR, ချပ်မန်း TF, Liebowitz MR, Klein DR, Fyer အဘိဓါန် AJ: ယေဘူယျလူမှုရေး phobia: ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1995; 52: 230-237
Stein ကို MB, Chartier MJ, Hazen AL, Kozak သင်္ဘော MV, Tancer ME, Lander S က, Furer P ကို, Chubaty: D, Walker က JR: အထွေထွေလူမှုရေး phobia ၏တစ်ဦးကတိုက်ရိုက်-အင်တာဗျူးမိသားစုလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 155: 90-97
မန်စီနီကို C, ဗန် Ameringen M က, Szatmari P ကို, Fugere ကို C, Boyle က M: လူမှုရေး phobia နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူအမျိုးသားတစ်ဦးက High-အန္တရာယ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု 1996; 35: 1511-1517
Kendler KS, Neal MC, Kessler RC, Heath AC အ, Eaves LJ: အမျိုးသမီး phobias ၏မျိုးဗီဇရောဂါ: အ agoraphobia ၏ interrelationship, လူမှုရေး phobia, အခွအေနေ phobia နှင့်ရိုးရှင်းသော phobia ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 49: 273-281
ယရှေုသညျ GM က, Rassnick H ကို, Preud'homme-Rivelli X ကို, Austin T က, Cunjak J ကို, Mick S က, Fine ld, Woodley Ka, က de Knowles ဂျာ Fyer အဘိဓါန် AJ, Vieland VJ, Weissman MM, Hodge SE, Heiman GA, Haghighi က F, Das K ကို Maier W က, အဒမ် PB, Freimer NB, Klein DF, Gilliam TC: ထိတ်လန့်ရောဂါတစ်မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်မျိုးဗီဇမျက်နှာပြင်၏ရလဒ်များ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ 1998; 81: 139-147
Hanna GL, Himle ဂျာ ​​Curtis GC, Koram DQ, VanderWeele J ကို, Leventhal BL, ကွတ် Eh Jr: serotonin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါနှင့်အတူမိသားစုများထဲမှာသွေး serotonin အတွက်ရာသီအလိုက်မူကွဲ။ Neuropsychopharmacology 1998; 18: 102-111
Lesch KP, Dietmar B, Heils တစ်ဦးက, Sabol SZ, Greenberg bd, Petri S ကိုဗင်္ယာမိန် J ကို, Muller CR, Hamer-DH, Murphy က DL: အ serotonin Transporter ဗီဇစည်းမျဉ်းဒေသတွင်း၌တစ်ဦး polymorphic နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်-related စရိုက်များ၏အသင်းမှ။ သိပ္ပံ 1996; 274: 1527-1531
Crow RR: စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ, စိတ်ရောဂါ၏ Neurobiology ၌တည်၏။ Charney DS, Nestler EJ, Bunney BS တည်းဖြတ်။ နယူးယောက်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, 1999, စစ 451-462
Holland, E, Kwon J ကို, Weiller က F, Cohen ကို L ကို, Stein DJ သမား, DeCaria ကို C, Liebowitz M က, လူမှုရေး phobia အတွက်ရှိမောင်ဃ Serotonergic function ကို: ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 1998; 79: 213-217
Mikkelsen EJ, Detlor J ကို, Cohen ကို DJ သမား: Tourette ရဲ့ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် haloperidol ခြင်းဖြင့်အစပျိုးကျောင်းရှောင်ရှားခြင်းနှင့်လူမှုရေး phobia ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1981; 138: 1572-1576
Liebowitz MR, Schneier က F, Campeas R ကို, Holland, E, ဒုတိယ Hatter J ကို, Fyer အဘိဓါန်တစ်ဦးက, Gorman J ကို, Papp L ကို, Davies က S, Gully R ကို: လူမှုရေး phobia အတွက် atenolol vs Phenelzine: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled နှိုင်းယှဉ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 49: 290-300
Simpson HB, Schneier က F, Campeas R ကို, မာရှယ် RD, Fallon BA, Davies က S, Klein DF, Liebowitz MR: လူမှုရေး phobia များ၏ကုသမှု Imipramine ။ J ကို Clin Psychopharmacol 1998; 18: 132-135
McCann UD, Slate SO, Geraci M က, Roscow-Terrill: D, Uhde TW: တစ်ဦးကလူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအပေါ်သွေးကြောသွင်း pentagastrin ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု။ Neuropsychopharmacology 1997; 16: 229-237
Papp LA က, Klein DF, Martinez J ကို, Schneier က F, ကိုးလ် R ကို, Liebowitz MR, Holland, E, Fyer အဘိဓါန် AJ, ဂျော်ဒန်က F, Gorman JM: Carbon-ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်-သွေးဆောင်ထိတ်တလန်၏ Diagnostic နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာသတ်မှတ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1993; 150: 250-257
ထင်းရှူး DS, Klein RG, Coplan JD, Papp LA က, Hoven CW, Martinez J ကို, Kovalenko P ကို, ကထပ်လောင်း DJ သမား, Moreau: D, Klein DF, Gorman JM: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့် nonill နှိုင်းယှဉ်အုပ်စု Differential ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ sensitivity ကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 57: 960-967
Stein ကို MB, Tancer ME, Uhde TW: ထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအတွက် orthostasis မှဇီဝကမ္မနှင့် plasma norepinephrine တုံ့ပြန်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 49: 311-317
Stein ကို MB, Asmundson GJG, Chartier M က: အထွေထွေလူမှုရေး phobia အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Response ။ J ကို disorders 1994 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု; 31: 211-221
Potts NL, စာအုပ်က S, Davidson JR: လူမှုရေး phobia ၏ neurobiology ။ int Clin Psychopharmacol 1996; 11 (ပျော့ပျောင်း 3): 43-48
Papp LA က, Gorman JM, Liebowitz MR, Fyer အဘိဓါန် AJ, Cohen ကို B ကို, Klein DF: လူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအတွက် Epinephrine တာဟာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1988; 145: 733-736
Tancer ME, Stein ကို MB, Uhde TW: လူမှုရေး phobia အတွက်သွေးကြောသွင်း clonidine မှကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု: ထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်အတူလူနာမှနှိုင်းယှဉ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1993; 34: 591-595
Tiihonen J ကို, Kuikka J ကို, Bergstrom K ကို Lepola ဦး, Koponen H ကို, Leinonen အီး: လူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအတွက် Dopamine reuptake site ကိုထု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 154: 239-242
Laruelle M က: တစ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှု in: Vivo စည်းနှောင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းစနစ်နှင့်အတူ Synaptic neurotransmission Imaging ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 2000; 20: 423-451
Davidson JR, Krishnan KR, ချားလ်စ် HC, Boyko အို Potts NL, Ford ကားသည် SM, ပက် L ကို: လူမှုရေး phobia အတွက် Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1993; 54 (ဒီဇင်ဘာပျော့ပျောင်း): 19-25
Tupler LA က, Davidson JRT, Smith က RD, Lazeyras က F, ချားလ်စ် HC, Krishnan KRR: လူမှုရေး phobia တစ်ထပ်ပရိုတွန်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 42: 419-424
Potts NLS, Davidson JRT, Krishnan KR, Doraiswamy pm တွင်: လူမှုရေး phobia အတွက် Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 1994; 52: 35-42
Stein ကို MB, Leslie WD: တစ်ဦးကဦးနှောက်တစ်ခုတည်းဖိုတွန်-ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography generalized လူမှုရေး phobia (အ SPECT) လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1996; 39: 825-828
ခေါင်းလောင်း CJ, Malizia AL, Nutt DJ သမား: လူမှုရေး phobia ၏ neurobiology ။ EUR Neuropsychopharmacol 1998; 8: 311-313
Birbaumer N ကို, Grodd W က, Diedrich အို Klose ဦး, Erb M က, Lotze M က, Schneider က F, Weiss ဦး, Flor H ကို: fMRI လူမှုရေး phobics လူ့မျက်နှာများမှ amygdala activation ဖော်ပြသည်။ Neuroreport 1998; 9: 1223-1226
ဟွမ် DR, Kegeles LS, Laruelle M က: (-) - N ကို - [(11) ကို C] propyl-norapomorphine: D: (2) receptors ၏ပေပုံရိပ်တစ်ခု positron-တံဆိပ်ကပ် dopamine agonist ။ Nucl Med Biol 2000; 27: 533-539
Gurley: D, Cohen ကို P ကို, ထင်းရူး DS, Brook J ကို: လူငယ်တစ်ဦးကြီးများအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ comorbidity ။ J ကို disorders 1996 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု; 39: 191-200
Horwath အီး, Wolk SI, စတိန်း RB, Wickramaratne P ကို, Sobin ကို C, အဒမ် P ကို, Lish JD, Weissman MM: လူမှုရေး phobia နှင့်မိသားစု cotransmission သို့မဟုတ်အခြားအချက်တွေကြောင့်ထိတ်လန့်ရောဂါအကြား comorbidity လား? Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1995; 52: 574-582
Davis က M ကို: ကွောကျရှံ့သောတုံ့ပြန်မှုများ Neurobiology: အ amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neuropsychopharmacology 1997; 9: 382-402
LeDoux J ကို: ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်: ဘယ်မှာကျနော်တို့ပါပြီ, အဘယ်မှာကျနော်တို့သွားမည်နည်း Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 44: 1229-1238
Rosenberg က DR, MacMaster လက်ဗွေ, Keshavan က MS, Fitzgerald KD, Stewart က CM, Moore က GJ: paroxetine ယူပြီးကလေးအထူးကု obsessive compulsive ရောဂါလူနာ caudate glutamatergic ပြင်းအားအတွက် Decrease ။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 39: 1096-1103